/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/SARM SR9009 ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော ၀ ယ်ခြင်းလမ်းညွှန်
အပေါ် Posted 10 / 14 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
1.What ဆိုတာဘာလဲ SR9009?
SR9009 သိုမဟုတ် stenabolic သည် CAS 1379686-29-9 ဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်ပြီး cardio လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ဆိုးကျိုးများကိုတုပသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သင့်အားပိုလျှံခန္ဓာကိုယ်အဆီအချို့ကိုချုံ့ပစ်ရုံသာမကဘဲခံနိုင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင်သင်၏ခံနိုင်ရည်ကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။
SR9009 သည်ဒြပ်ပေါင်းဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပါမောက္ခသောမတ်စ် Burris ၏အတွေ့အကြုံမှတစ်ဆင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာနီးကပ်စွာမှပြောပြတယ် SARMS (Selected Androgen Receptor Modulators) သို့သော်အရိုးကြွက်သား၊ adipose တစ်ရှူး၊ ဦး နှောက်နှင့်အသည်းများတွင်တွေ့ရသော Rev-Erbαပရိုတိန်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။
ပါမောက္ခ Burris နှင့်အတူတက်လာ၏ SR9009 (1379686-29-9) သည် circadian rhythm လေ့လာရန်နှင့်နားလည်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
2.HS SR9009 မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
2km ပြေးစက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဟဲဗီးဝိတ်လေးများကိုရုတ်သိမ်းပြီးနောက်သင်ခံစားရသည်ဟုသင်သိပါသလော။ ကောင်းပြီ၊ SR9009 ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး သငျသညျတူညီသောလမ်းခံစားရစေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်အဆိုပါ circadian မော်ဂျူ, lipid စည်းမျဉ်းများနှင့်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အခန်းကဏ္ has ရှိပါတယ်။
SR9009 SARM သည် Rev-Erb ကိုလှုံ့ဆော်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဤပရိုတိန်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆီများ၊ သကြားများနှင့်ကိုလက်စထရောကိုပိုလောင်ကျွမ်းနိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါကြောင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကိုတက်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်တောင်သင်ဟာကာယလေ့ကျင့်ခန်းပိုလုပ်နိုင်ဖို့အားအင်နည်းပြီးမောပန်းမှုနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။
Stenabolic သည်အဆီများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၏လောင်စာသုံးစွဲမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်လျှင်သင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးရရှိမည်မှာသေချာသည်။ murine model များကို သုံး၍ အကြိုလေ့လာမှုတွင်၎င်းအောက်ရှိကြွက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် SR9009 အမှုန့် (1379686-30-2) သောက်သုံးသောပမာဏသည်ယခင်ထက်နှစ်ဆမြန်သည်။ ဤသက်သေသာဓကသည် stenabolic အားကစားသမားများတွင်တားမြစ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများစာရင်းတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အရူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်၊ ဒီသတင်းဟာခင်ဗျားရဲ့နားတွေကြားချင်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ သင်အနားယူစဉ် Stenabolic သည်သင်၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။ အစာစားပြီးလျှင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အစားအစာကိုအဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ သို့သော် SR9009 ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ချက်ကဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုချက်ချင်းတိုးစေပြီးဤအဆီကိုချက်ချင်းစတင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
လတ်တလောလေ့လာမှုများအရ stenabolic သည်ကင်ဆာရောဂါကိုတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ SR9009 ကင်ဆာရောဂါသည် PIK3CA, HRAS နှင့် BRAF အပါအ ၀ င်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုထိခိုက်စေသည်။ ကင်ဆာဆဲ (လ်) များတွင်ထုတ်ကုန်သည် apoptosis ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
3 ။ SR9009 ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
SR9009 ကြွက်သားအမြတ်၏ချွတ်တံဆိပ်အသုံးပြုမှုအပြင် မူးယစ်ဆေးဝါး, ဖြည့်စွက်သိသိသာသာဆေးဘက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများရှိပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများနှင့်လေဖြတ်နိုင်သောသူများအတွက်ဆရာဝန်များကအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
သင်၏ရောဂါကိုစီမံရန် SR9009 အမှုန့် (1379686-30-2) ကိုစီမံရန်သင်စီစဉ်ထားပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်ကြိုတင်ပြောဆိုပါ။ မည်သည့်ဆိုးရွားသည့်လက္ခဏာကိုမဆိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းဤဆေးသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်၊ သို့သော်သင့်ဆရာဝန်ကလက်ရှိဆေးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရမည်။
တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်ပုံမှန် SR9009 သောက်သုံးသောပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် 30mg ဖြစ်သည်။ ဆေးကိုသုံးပိုင်းခွဲသည်။
သင်သည်ခံနိုင်ရည်ရှိလျှင်အားကစားခန်းမမသွားခင်လေးတွင်ဖြည့်စွက်စာကိုယူသင့်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ SR9009 ၏သက်တမ်းဝက်သည်တိုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအရပ်မှသက်ရောက်မှုများသည်လျှပ်တစ်ပြက်ပေါ်လာသည်။ အကောင်းဆုံးအားဖြင့်တစ်နေ့လုံးထိရောက်သောဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်အစာမစားမီစီမံပါ။
4.B SR9009 ၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သင်ဘာကိုမျှော်လင့်ပါလဲ။
SR9009 SARM သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုတိုးတက်စေသည်။ မျိုချမိသည်နှင့်တပြိုင်နက် stenabolic သည်ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ကယ်လိုရီများများလောင်ကျွမ်းစေမည့်အစားအဆီများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပရိုဂရမ်ပြုလိမ့်မည်။ ဤဖြည့်စွက်ဆေးသည်အဆီသိုလှောင်ထားသည့်မျိုးရိုးဗီဇများကိုအလယ်အလတ်မျှသာသာမကအသည်းအတွင်းရှိအဆီဆဲလ်အသစ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်။
သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်ဖြစ်ပါကသင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကိုပါထည့်သွင်းပါ။ SR9009 ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြည့်စွက်ခြင်း၊ Stenabolic ကိုသုံးပြီး fatty acid နှင့် plasma triglycerides ကို 23% နှင့် 12% အသီးသီးလျှော့ချသည်။
ဝယ်သူမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားအသုံးပြုသူတစ် ဦး က SR9009 အမှုန့်ကိုအတည်ပြုသည်။1379686-30-2သုံးလအတွင်း 17 ပေါင်ကိုသူမဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သည်။
ဤဖြည့်စွက်ဆေးသည်ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးစေရုံသာမကစွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ SR9009 သောက်သုံးသောဆေးကိုသောက်ပြီးနောက်သင်ရရှိသောခံစားချက်သည်အလေးမခြင်းနှင့်တူသည်။
အဆိုပါဆေးသည်ကြွက်သားဆဲလ်များအတွင်းမှ mitochondria အမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤ organelles များသည်ကြွက်သားတစ်သျှူးများ၌စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကြွက်သားများအတွင်းဂလူးကို့စ်အသုံးပြုမှုနှင့်ဖက်တီးအက်စစ်စားသုံးမှုတိုးလာလိမ့်မည်။
လက်တွေ့အားဖြင့် SR9009 သည်ကြွက်သားပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ် sarcopenia ခံစားနေရသောသက်ကြီးရွယ်အိုများကိုအကျိုးပြုသည်။
အားကစားလေ့ကျင့်သူအများစုသည် SR9009 ကြွက်သားများသောဆေးများကိုသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအလေးမြားကိုထုတျနပွေီ၊
ဖြည့်စွက်မှုသည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယခင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားစွာမြင့်တက်စေလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဒီ SR9009 အကျိုးခံစားခွင့်တွေဟာလိမ်လည်မှုလို့ထင်ရင် doping anti-agent ကဘာကြောင့်ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုအားကစားတွေမှာအသုံးပြုတာကိုတားမြစ်ထားတာလဲဆိုတာကိုသင်မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါတယ်။
Stenabolic ကိုတည်ထောင်သူသောမတ်စ် Burris ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းမူးယစ်ဆေးသည်သင့်အားအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအတွေ့အကြုံရှိအားကစားသမားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်သည့်အခါ၌ပင်သင်သည်စွမ်းအင် (သို့) လုံလောက်မှုမရှိတော့ပါ။
သင်တစ်နေ့တာအတွင်းအိပ်ငိုက်နေလျှင် stenabolic သည်သင်၏နောက်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်နိုင်သည်။ preclinical လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ဖြည့်စွက် murine မော်ဒယ်များ၏အိပ်စက်ခြင်းပုံစံကိုပြောင်းလဲသလိုပဲ။ သိပ္ပံပညာရှင်များကထိုကြွက်များသည်တစ်နေ့တာတွင် ပို၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိကြောင်းနှင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှနက်ရှိုင်းစွာအိပ်စက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းပုံစံကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်စည်းချက်ကိုရယူလိုပါက SR9009 သည်ဝမ်းမြောက်စွာပြုလုပ်လိမ့်မည်။
SR9009 ဝက်သက်တမ်းတိုတောင်းသောကြောင့်နိုးထမှုသက်ရောက်မှုသည်ခဏသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့လုံးအိပ်မပျော်နိုင်ပါ။
သုတေသနကအတည်ပြုသည်အသည်း fibrosis ပါသောကြွက်များသည် SR9009 ကိုနှစ်ပတ်ကြာယူပြီးနောက်အပြည့်အဝပြန်လည်သက်သာလာသည်
နှလုံးပုံမှန်မဟုတ်သောကြီးထွားလာသည့်အခါ SR9009 အမှုန့် (1379686-30-2) သည်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကွဲလွဲချက်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ ခိုင်မာသည့်သွေးလွှတ်ကြောများရှိသောကြွက်အချို့ကို stenabolic ဖြင့်ကုသသောအခါခုနစ်ပတ်အကြာတွင်သွေးကြောများကျဆင်းမှုပမာဏလျော့ကျသွားကြောင်းသုတေသီများကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အချို့သောသုံးစွဲသူများကဤဖြည့်စွက်ဆေးသည်သူတို့၏သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
သင်သည်အဝလွန်နေလျှင်သင်၏လက်စထရောအဆင့်များသည်မြင့်မားနိုင်သည်။ SR9009 သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီး LDL ၏ 47% အထိလျှော့ချလိမ့်မည်။ သင်ဖြည့်စွက်သည် HDL အဆင့်ကိုမထိခိုက်ကြောင်းသတိပြုပါ။
Rev-Erbs သည် CNS အတွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာများကိုထိန်းညှိရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ SR9009 သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော Rev-Erbαအနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုလှုံ့ဆော်သည်။
မူးယစ်ဆေးသည် CCL2၊ MMP-9 နှင့် TNF-αကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းမော်လီကျူးများထုတ်လုပ်မှုကိုဖိနှိပ်သည်။ တစ်ရှူးများပျက်စီးခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းများသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောအချက်များဖြစ်သဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အိုမင်းခြင်း၌ SR9009 ကင်ဆာရန်အလားအလာကိုလေ့လာနေသည်။
သင့်တွင် trypanophobia ရှိလျှင်သင့်အတွက်သတင်းကောင်းရှိပါသည်။ ကောင်းပြီ, SR9009 ပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆီလောင်ကျွမ်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနည်းတူ ပို၍ နာကျင်မှုမရှိသောထိုးဆေးများမရှိတော့ပါ။
SR5 ၏ 9009.Half ဘဝ
SR9009 ဝက်ဘဝသည်လေးနာရီမျှတိုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်သွေးစီးဆင်းမှုတွင်မူးယစ်ဆေး၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုတည်ငြိမ်စေရန်သင်၏သောက်သုံးသောပမာဏကိုလေးနာရီအကြာခွဲထားရမည်။
SR9009 သောက်သုံးသောအချက်အနည်းငယ်အပေါ်မူတည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်အောင်မြင်လိုသောဆန္ဒနှင့်သင်၏သံသရာတွင်အခြားဖြည့်စွက်စာများထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိ။ ထို့အပြင်ဆေးညွှန်းပမာဏသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်မည်သို့တုန့်ပြန်သည်နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
ပျမ်းမျှသောက်သုံးခြင်းသည်တစ်နေ့လျှင် 30mg ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်သီးခြားဆေးသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ စာသားအရ၊ ဤညွှန်းကိန်းသည်သင်၏စတုရန်းမီတာသုံးခွက်ကိုမသောက်မှီဆေးကိုစီမံသင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ လေးနာရီအကြာတွင်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်စိတ်မရှည်သောသုံးစွဲသူများအတွက် SR9009 အမှုန့် (1379686-30-2) အကြိုလေ့ကျင့်ခန်းထိုးခြင်းသည်များသောအားဖြင့်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှမူးယစ်ဆေးဝါးမတိုက်ဆိုင်ဘဲလေးနာရီကြာတဲ့အချိန်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးကိုတောင်သုံးနိုင်တာလဲ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဤဆေးသောက်ရန်အချိန်ဇယားနှင့်အဆင်မပြေလျှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမပြုလုပ်မီတစ်နာရီအကြာတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
SR9009 သံသရာသည်ရက်သတ္တပတ်ရှစ်မှ ၁၂ ပတ်အထိကြာသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိုသည်းခံနိုင်သည့်အလားအလာရှိသောကြောင့် 8 ရက်သတ္တပတ်ကိုပိတ်ပစ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဤဆေးသည်အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်ကိုမထိခိုက်ပါ။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ SR2 သံသရာအတွင်းရှိအခြားအရေးကြီးသောအကာအကွယ်ဖြည့်စွက်သည့် N9009Guard ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဤကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
7. သင် SR9009 အတွက် PCT လိုအပ်ပါသလား။
အခြားဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်မတူဘဲ stenabolic မလိုအပ်ပါ ရာခိုင်နှုန်း (Cycle Post Therapy) သည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အဆင့်ကိုမ ၀ င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် testosterone ဟော်မုန်း.
8.Possible ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် SR9009 အသုံးပြုမှုအန္တရာယ်
အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများသည်လူသစ်များကိုအများအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည် သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဖြည့်စွက်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်အခါရောဂါလက္ခဏာများပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သို့သော် SR9009 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလျှင် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါကသင်ရပ်ဆိုင်းပြီးသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုသင့်သည်။
SR9009 သည် libido သို့မဟုတ် erectile dysfunctions နည်းသောအမျိုးသားများ၏အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ရံဖန်ရံခါဖြည့်စွက်ဆေးသည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းစေနိုင်သည်။
Stenabolic ကမဟုတ်ပါဘူး steroid တစ်မျိုး။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသောက်သုံးခြင်းသည်ဟော်မုန်းစနစ်ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကမကျဆင်းဘူး၊ အမျိုးသမီးများအတွက်၊ ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းမဟုတ်ပါ။
အခြား SARM ဖြင့် SR9 ကိုစစ်ဆေးခြင်း
Ostarine vs. SR9009
နှင့်အတူ SR9009 stack Ostarine (MK-2866) အထူးသဖြင့် recomping အဆင့်အတွက်, ခြွင်းချက်ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Ostarine သည်၎င်းင်း၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးအမြောက်အများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ဝန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး SARM ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်ခံနိုင်ရည်ကိုအလိုရှိလျှင် SR9009 ဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်။ Stack တွင်ရှိနေစဉ် 25mg ၏ Ostarine ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သေချာပါစေ။ stenabolic အတွက်, 10mg အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာကိုရောက်တော့မယ့်အချိန်မှာယူရပါမယ်။
GW 9009 vs. SR501516
SR9009 နှင့် GW501516 (Cardarine) အနီးကပ်တူညီရှိသည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများကဤဒြပ်ပေါင်းနှစ်မျိုးသည်တူညီသော receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
သင်သိပြီးသားအတိုင်း, stenabolic သည်တစ်ဝက်လောက်မြန်သောသက်တမ်းဝက်ရှိပြီး၎င်းသည်သင့်ကိုတစ်နေ့လုံးအသုံးမဝင်နိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, Cardarine ရဲ့ဇီဝရရှိနိုင် 24 နာရီအထိတိုးချဲ့။ ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုက ၂၄/၇ အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည် SR9009 ကို GW501516 နှင့်အတူအသုံးပြုပါက၎င်းကိုယခင်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဆိုလိုတာက stenabolic ကိုသင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေ့တွေမှာသာစီမံသင့်သည်။
SR9009 stack တွင်ရောက်သည့်အခါ 10mg သာသောက်ရမည်၊ သင်မထွက်ခင်မကြာမီသောက်ရမည်။ GW501516 အတွက်၊ အကောင်းဆုံးသောဆေးညွှန်းသည်တစ်နေ့လျှင် 20mg ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏နံနက်စာကိုစီမံရန်ဖြစ်သည်။
SR9009 သည်ရောင်းအားအတွက်အဓိကအားဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းမှလျင်မြန်စွာပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊
အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအမျိုးမျိုးမှသုံးစွဲသူများကဖြည့်စွက်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိဘဲပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် အချို့သူများအတွက် SR9009 အမှုန့်ကိုစီမံပြီးသောအခါလုံလောက်မှုနှင့်စွမ်းအင်တိုးတက်မှုသည်မြင့်မားသောအဆင့်တွင်ရှိသည်။1379686-30-2).
ဆိုးကျိုးအနေဖြင့်၊ အချို့သုံးစွဲသူများသည် ၄ ​​နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်မကြာခဏသောက်သုံးခြင်းကိုမစွမ်းနိုင်ပါ။ သို့သော် SR9009 stack ကိုသုံးသူများသည်အားကစားခန်းမသို့သွားစဉ်တွင်ဖြည့်စွက်ချက်သာလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။
စားသုံးသူအနည်းငယ်က stenabolic ကသူတို့ကိုသိပ်မခံစားရဘူးလို့ ၀ န်ခံခဲ့သည်။ အိပ်မပျော်ခြင်းအပြင် SR9009 ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမည်သူမျှမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
11. SR9009 ဇီဝရရှိနိုင်ပါသလား။
SR9009 တွင်အထူးသဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်ကုသမှုတွင်ဇီဝမရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာငြင်းဆိုနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုမရရှိနိုင်ပါကလူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင် SR9009 ၏ရလဒ်ကောင်းများမရှိပါ။
12 ။ SR9009 ကိုဝယ်ရန်
မရေမတွက်နိုင်သောကုန်သည်များသည် SR9009 ကိုရောင်းရန်တင်နေသည်။ အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များသည်ဖြည့်စွက် ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သော်လည်းသင်တုန့်ပြန်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်မထိမိစေရန်သတိထားသင့်သည်။
သငျသညျလူ့အဆင့် stenabolic ချင်တယ်ဆိုရင်, ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပေးသွင်းထံမှရှာပါ။ သင်နှင့်အတူအမှာစာလုပ်နိုင်ပါတယ် AASraw.
Bodybuilding သည် 13.SR9009
SR9009 အမှုန့် (1379686-30-2) သည်ကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ပေးသည့်အတွက်ဖြည့်စွက်ဆေးများကခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းသို့ခိုးဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အတော်လေးတက်ကြွစွာရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့ပြီးယခင်ကထက် ပို၍ ရန်လိုခဲ့ကြသည်။
အမြောက်အများသိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများသည် SR9009 မှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်ပိုမိုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသည်သင်၏အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေသဖြင့်ပေါ့ဆခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် SR9009 Bodybuilding ဖြည့်စွက်ဆေးသည်တစ်ရှူးများကိုရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုလျှော့ချပေးပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
SR9009 Bodybuilding ဖြည့်စွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ အနည်းဆုံး၊ ဤအချက်ကိုထောက်ခံရန်အကြိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ထုတ်ကုန်၏မရေမတွက်နိုင်သောအသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများလုံလောက်ပါသည်။
သို့သော်ဤဆေး၏ထိရောက်မှုသည်သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ သုတေသီများနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအကြားအငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် SR9009 ပါးစပ် bioavailability သည်သုညဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်မာရ်နတ်၏ထောက်ခံအားပေးသူအဖြစ်မခံလိုပါ။ သို့သော် ၉၅% သော stenabolic အသုံးပြုသူများသည်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအားအသုံးမ ၀ င်သည့်အခါအားကစား၌အသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ရန်အတွက် anti-doping အဖွဲ့အစည်းများသည်အဘယ်ကြောင့်အာရုံကြောများရှိနိုင်ကြောင်းမေးမြန်းသင့်သည်။
သတိပြုရမည်မှာ SR9009 ရလဒ်သည်သင်ကျန်းမာသောအစားအစာကိုပုံမှန်သောက်စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသားစားအစားအစာများ၊ ကယ်လိုရီများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
Cho, အိပ်ချ်, Zhao, X တို့မှာ et al ။ (2012) ။ REV-ERBαနှင့် REV-ERBβမှ Circadian အပြုအမူနှင့်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေ။ Gene Expression ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ Salk Institute.
Morioka, N. , Zhang, FF, Tomori, M. , Hisaoka-Nakashima, K. , Saeki, M. နှင့် Nakata, Y. (2016) ။ C6 Astroglial Cells တွင် Nuclear Receptor REV-ERBs ၏ Stimulation သည် CXNUMX Astroglial Cell များတွင် Pro-Inflammatory Molecules ၏ Tumor Necrosis Factor-Induced Expression ဖော်ပြခြင်းကိုထိန်းညှိပေးတယ်။
Thomes, PG, et al Brandon-Warner, အီး။ (2016) ။ Rev-Erb Agonist နှင့် TGF-βအလားတူ Autophagy ကိုအကျိုးသက်ရောက်သော်လည်း Hepatic Stellate Cell Fibrogenic Phenotype ကိုထူးခြားစွာထိန်းညှိပေးသည်။ Int J ကိုထဲကဓာတုပစ်စညျးဆဲလ် Biol.
Dodson, ခ (2013) ။ မူးယစ်ဆေးအသစ်သည်လေ့ကျင့်ခန်း၏ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတုပသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေး.
Woldt, အီး, Sebti, Y. Et al ။ (2013) ။ Rev-Erbαသည် Mitochondrial Biogenesis နှင့် Autophagy ကိုထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့်အရိုးကြွက်သား Oxidative စွမ်းရည်ကို Modulates ။ သဘာဝဆေးပညာဂျာနယ်.
Sulli, G. အ, Rommel, အေ, et al ။ (2018) ။ REV-ERB မ်ား၏ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာ Activation သည်ကင်ဆာရောဂါနှင့် Oncogene-Induced Senescence တို့တွင်သေစေနိုင်သည်။ သဘာဝ (သိပ္ပံ၏ပြည်တွင်းဂျာနယ်).
1349 Views စာ
anabolic steroids ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများအားဖြင့်အထင်လွဲမှားမှုများ Oxandrolone (Anavar) အကုန်လုံးကိုမင်းသိဖို့လိုတယ်